Graphical vatengi veGit pane yako GNU / Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchitsvaga graphic vatengi ekugadzirisa Git Nekuti iwe uri mumwe wevasingade kushanda kubva kuchiteshi zvakanyanya, saka ichi ndicho chinyorwa chawanga uchitsvaga, sezvo isu tichipa dzimwe nzira nhatu dzinonakidza dzekuti uve nemutengi akanaka weiyo Git chishandiso uye nekudaro gadzirisa kodhi yako mune imwe graphical nzira uye inonzwisisika mune yako GNU / Linux kugovera. Kunyangwe kune vako vatove vanoziva kushanda neGit kubva kune zvinyorwa-modhoni koni, izvi zvinganzwikawo kunge zvinonakidza kana iwe usina kujaira nazvo.
Sezvaunoziva, Git chirongwa cheshanduro yekudzora yakashandiswa zvakanyanya nevakagadziri, kunyanya paLinux, sezvo yakagadzirwa naLinus Torvalds. Asi sezvazvinowanzoitika munzvimbo dzeUNIX, kunze kweMacOS, rakawanda rebasa rinoitwa uchishandisa koni nemirairo yatinayo. Ichi ndicho chinhu chisingadiwe nevamwe vanhu, asi vamwe vasingade kusiya koni yezvigadzirwa zvemifananidzo pasina chinhu munyika. Kana iwe uri mumwe wevaya vanosarudza GUI, tinokurudzira 3 yakanaka graphical Git vatengi:
SmartGit: is a project kushandisa chishandiso chemahara chekushandisa zvisiri zvekushambadzira (pakushandisa zvekutengesa unofanirwa kubhadhara rezinesi rinosvika madhora makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe). Iyo interface inowanikwa zvakakwana, iine huwandu hweanoshanda uye yakapusa kushandisa sezvo iri imwe yeinonzwisisika iripo. Zvakare, inowanikwa yeLinux, macOS, uye Windows.
GitKraken: is a project izvo zvinobvumidza kushanda neGit uye Github graphically. Kunge SmartGit inoshanda paMacOS, Windows neLinux, saka chishandiso cheplatform. Asi kusiyana SmartGit, iyo ine yakareruka interface, GitKraken inotsvaga yakanaka dhizaini asi iine imwe yekuwedzera mashandiro mune anowanikwa maturu nhandare. Zvekushandisa zvekutengesa zviri mahara, asi zvekushandisa zvizere zvinobhadharwa, kunyangwe iwe uchigona kuzviedza mahara kwemazuva gumi nemashanu.
Git Cola: is a project yemahara software yakanyorwa muPython uye yakagadzirwa kuti ive nesimba uye yakapusa. Kusiyana nemaviri apfuura, zvakanyanyisa, kunyangwe kana iwe uchida kubvisa marezinesi uye kubhadhara, inogona kunge iri sarudzo inonakidza kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Graphical vatengi veGit pane yako GNU / Linux distro